I-Enhydro quartz okushiwo. Ubucwebe njengokwendandatho noma indandatho iyathengiswa - ividiyo
Amathegi I-Enhydro, Quartz
I-Enhydro quartz nencazelo yezakhiwo. I-Enhydro quartz iyathengiswa ingasetjenziswa ubucwebe njenge-pendant noma indandatho.
Inama-bubble amanzi abhajwe ngaphakathi kukristali lapho ekhula. Amatshe abaluleke kakhulu yilawo aqukethe ama-bubble ashukumisayo, lapho kunephakethe lomoya ku-crystal futhi i-bubble encane yamanzi ingahanjiswa phezulu naphansi ngaphakathi ephaketheni. Amanye ama-Bubydro's anamabhamuza amanzi kuwo angama-static futhi angahambi.
I-Petroleum enhydro quartz
Njengoba ubona esithombeni nakwividiyo, le kristalu yi-an i-shekimer diamond or i-quartz ye-petroleum, wase-Afghanistan. Zonke zivela kumayini efanayo kepha ezinye ziyi-ampydro quartz ngoba kukhona uketshezi obonakalayo kanye nokukhanya kwe-gaz okuboshwe ngaphakathi kukristalu.
I-Enhydro quartz nencazelo yezakhiwo
Amanzi angaphakathi kulezi zinhlayiya agcinwe emsulwa ezintweni ezingcoliswa yizimboni zezinhlobo zabantu. Lokhu kwenza kube yikristalu ekahle ongayisebenzisa kulabo abafuna ubumsulwa. Yiba yilokuhlanzeka kwengqondo, umzimba noma umphefumulo. Lawa manzi yi-elixir yangempela yokuphila futhi aqukethe ubumsulwa bohlelo lwaphezulu lwangempela. Umuntu angazindla ngamakhristali we-Enhydro quartz ngokugxila kokuxhuma nalolu hlelo lwaphezulu. Leli tshe lihlinzeka ngokuxhumeka okucacile nokuqondile kwe-Akashic Record.
Ukusebenza naleli tshe kuhle kakhulu ukuhlanza nokuhlanzwa okwakhelwe ubuthi kusuka kulolo lonke uhlelo lomzimba. Kusetshenziswa le kristalu kwifomu le-elixir kusiza amazinga ajulile wokuhlanza umzimba nokusebenza ngokomoya ngamakristalu we-nguvu acocekile ahlinzekayo.
I-Enhydro quartz yase-Afganistan
Sithengisa ubucwebe ezenziwe nge-Enhydro quartz njengobumba noma indandatho.